android ဖုန်းများအတွက်သင်္ချာ Calculator ကို APK ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » သင်္ချာ Calculator ကို
သင်္ချာ Calculator ကို APK ကို
သင်သည်သင်၏သင်္ချာပြဿနာများ၏အများဆုံးက Android app များအနက်အခမဲ့နှင့်အတူဖြေရှင်းနိုင်မသိခဲ့သလား ဒီအမြင့်မားအသုံးဝင်သောနှင့်အကျိုးရှိစွာဂဏန်းတွက်စက် app ကို, ကျောင်းမှာနေ့စဉ်အသက်တာ၌, အလုပ်မှာသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်လာကောလိပ်သို့မဟုတ်သင်လေ့လာနေရာတိုင်းမှာပါလိမ့်မယ်။
သင်တကယ်ရှုပ်ထွေးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ကူညီနိုင်သည့်ဂဏန်းတွက်စက်ကိုချစ်သလား? သငျသညျလျင်မြန်စွာရလဒ်များကိုရချင်ပါသလား? အခမဲ့သင်္ချာ Calculator ကို Install လုပ်ပြီးသင်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်သင်္ချာပြဿနာ solver, ပြောင်းလဲခြင်းဂဏန်းတွက်စက် option ကိုအဖြစ်များစွာသောအခြားဆုကြေးငွေရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သငျသညျသငျ၌အမှု၌ရှိသည်ဖို့ဘယျလိုခငျြဘူးမှာအားလုံးသင်္ချာကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်, ဒါပေမယ့်ချက်ချင်းတကယ့်ခက်ခဲပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်လော ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျအလုပျဖျောပွထားသတဲ့သင်္ချာဂဏန်းတွက်စက်ရှိသည်နှင့်အပြည့်အဝလုပ်ချင်ပါတယ်!
- (် / ပိတ်) haptic တုံ့ပြန်ချက်
- unit converter (အကွာအဝေး, အလေးချိန်, အမြန်နှုန်းအချိန်)
- ထိုဂဏန်းတွက်စက် (ဍ + m-, mr, MC) ၏မှတ်ဉာဏ်မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူအလုပ်
- ရိုးရှင်းသောဂဏန်းသင်္ချာ (အပွငျ, အနုတ်, အမြှောက်, ဌာနခွဲ, ရာခိုင်နှုန်း)
- မူလတန်း algebra (အဆ, အမြစ်ထုတ်ယူခြင်း, ဒဿမနှင့်သဘာဝလော်ဂရစ်သမ်, အပြစ်, cos, tan စသည်တို့)
- မူလတန်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို (လော်ဂရစ်သမ်, trigonometric, ပါဝါလုပ်ဆောင်ချက်များကို)
- factorial ခန့်မှန်းချက်
- ညီမျှခြင်း (linear ညီမျှခြင်း၏ linear, quadratic စနစ်)
- မက်တရစ် (မက်တရစ်၏ conjugation, matrix ၏ပစ်မှတ်, နံပါတ်နှင့်အတူမက်တရစ် / မက်တရစ်၏အမြှောက်, matrix ကိုရာထူးခန့်မှန်းချက်, ပြောင်းပြန် matrix ကိုအဓိပ်ပါယျ)
သင်မြင်သည့်အတိုင်းဒီ app algebra ပြဿနာများသို့မဟုတ်အခြေခံတွက်ချက်မှုများအတွက်သင်္ချာဂဏန်းတွက်စက်မသာဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လူတိုင်းအဘို့အသင့်လျော်သည်: ဆိကနေအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးပါ! unsolved သင့်ရဲ့ပြဿနာများကိုစွန့်ခွာမနေပါနဲ့, အခုသင်္ချာ Calculator ကိုတပ်ဆင်ပါ!
သင်္ချာ Calculator ကို
6.15 ကို MB
50,000 + downloads,
Calculator ကို +